Ilmaha loo la' yahay qooysas lagu meeleeyo oo kor u sii kacaya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ilmaha loo la' yahay qooysas lagu meeleeyo oo kor u sii kacaya
La daabacay måndag 27 oktober 2014 kl 14.00
Dhallaan badan oo aan ku noolaan karin guryahooda ayaa saf ugu jira sidii ey ku heli lahaayeen qooysas ey la noolaadaan. Magaalooyinka Stockholm, Göteborg iyo Malmö ayey baahidu aad u ballaaran tahay iyadoona dhallaanka lagu sii meeleeyo hooy ku meel-gaar ah, sida uu baaritaan ku ogaadey war-geeyska Metro.
Shuruudaha adadag ee hoggaannada degmooyinku ku xiraan dadyoowga waalidiinta noqoneya ayaa laga yaabaa iney adkeeysay suurtagalladii, iyadoo natiijadu noqoneeyso in aaney degmooyinku ka soo bixi kareeyn shuruudda xeerka bulshadu qorayo ee oranaya in aaney dhallaanku ku sugnaan karin muddo ka badan 6 bilood hooy ku meel-gaar ah. Halka ey magaalooyinka Stockholm iyo Göteborg mararka qaarkood dhacdo iney dhallaanku ku sugnaadaan guryaha ku meel-gaarka muddo sannad gaarsii-san, iyo magaalada Malmö uu xilligaasi gaarsii-san yahay 8 illaa iyo 9 bilood.
Magaalada Stockholm ayey dhallaan gaarsii-san 50 ku sugan yihiin hooyada ku meel-gaarka ah, kuwaasina oo dhoowraya sidii loogu heli lahaa qooys joogto ah, magaalada Göteborg ayey tiradaasi gaarsii-san tahay 100 halka ey magaalada Malmö tahay 40 carruur ah.